Nitombo Avo Roa Heny ny isan’ny Tranonkala Voabahana Na Nesorina Anaty Lisitra Fikarohana ao Frantsa Tato Anatin’ny Herintaona · Global Voices teny Malagasy
Nitombo Avo Roa Heny ny isan'ny Tranonkala Voabahana Na Nesorina Anaty Lisitra Fikarohana ao Frantsa Tato Anatin'ny Herintaona
Voadika ny 08 Febroary 2017 2:00 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, English, polski, Español, čeština , বাংলা, Italiano, Français
Hafatra misoratra amin'ny pejin'ireo tranonkala biharana'ny fibahànana avy amin'ny fanjakàna.
Raha nitsidika ny Vovonana Iraisampienena momba ny Fiarovana An-tSerasera – Forum International de Cybersécurité FIC 2017 – natao tao Lille ny 24 sy 25 Janoary 2017 ny minisitry ny atitany frantsay, Bruno Le Roux, dia nanamarika fa tamin'ny 2016 dia nanome baiko ny manampahefana ny hibahànana (834), na hanesorana anaty lisitra fikarohana (1929), izay rehefa atambatra dia manome tranonkala miisa maherin'ny 2700, mba hiadiana amin'ny “vetaveta atao amin'ny ankizy sy ny votoaty mihantsy asa fampihorohoroana”.
Tarehimarika nitombo avo roa heny mahery [rohy amin'ny teny anglisy] raha mitaha amin'ny tamin'ny taona talohan'io: araka ny tatitra navoakan'ny CNIL tamin'ny Aprily 2016, ilay sampandraharaha miandraikitra ny resaka fiarovana ny angondrakitra manokana momba ny tena, ny Martsa 2015 hatramin'ny Febroary 2016 ireo tarehimarika dia 312 ho an'ny fibahànana ary 855 ho an'ny fanesorana anaty lisitra fikarohana (fanesorana tsy ho hita anaty milina fikarohana), izany hoe tranonkala 1167 no voakasika rehefa atambatra [pdf]. 312 ireo fangatahana fibahànana tranonkala ka 68 dia momba ireo votoaty mihantsy asa fampihorohoroana ary 244 ireo tranonkala mampiseho vetaveta atao amin'ankizy, 1439 ireo fangatahana hanesorana votoaty ka 1286 noho ny fanindrahindràna ny asa fampihorohoroana, 153 noho ny vetaveta atao amin'ankizy ary 855 ireo fangatahana fanesorana tsy ho hita anaty lisitra fikarohana nampitaina tamin'ireo milina fikarohana (386 noho ny votoaty mihantsy asa fampihorohoroana ary 469 noho ny vetaveta atao amin'ankizy).
Tsy misy ahafahana milaza raha noho ny fisorohana ataon'ny polisy na noho ny fianahan'ireo tranonkala no anton'io fitosahana io.
Hatramin'ilay didim-panjakàna navoaka tamin'ny 5 Febroary 2015 ho fampiharana ny lalàna tamin'ny 13 Novambra 2014, nolaniana taorian'ilay asa fampihorohoroana tao Parisy sy Saint-Denis ary “manamafy ireo fepetra mifandraika amin'ny ady atao amin'ny asa fampihorohoroana”, dia afaka manome baiko, tsy mila mandalo aminà mpitsara, ny manampahefana ara-pitantanana mba hibahànana ireo tranonkala “miteraka asa fampihorohoroana na manindrahindra izany””, io no fepetra tena niteraka resabe tamin'ilay lalàna hatramin'ny niresahana azy. Ny fepetra fisintonana votoaty dia afaka ikendrena ihany koa ireo tambajotra sosialy, toy izany ny Facebook noho ny famoahana tety anaty aterineto ireo sary azo avy ao anatin'ny Bataclan nandritra ilay fandripahana.
Ahoana no fiasany
Ny famoahana, tamin'ny 15 Aprily 2016, ny tatitra voalohany avy amin'ny “olona manana fahefana hanao izany” ao amin'ny CNIL, nomena andraikitra hifehy ny “maha-ara-dalàna” ireo fangatahana fanesorana, fibahànana ary fanalàna tsy ho anaty lsitry ny fikarohan'ny milina mpikaroka, navoakan'ny polisy, dia nahafahana nanangana ny tombana voalohany. Raha misy fangatahana tsy ara-dalàna, azon'ilay “olona manana fahefana hanao izany” ny mangataka mpanalàlana, na manendry mihitsy mpitsara iray. Raha toa ilay votoaty ka nesorina, tsy ho bahànana ilay tranonkala.
Ny Office Central de Lutte Contre La Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC), sampandraharaha iray ao amin'ny polisy natao hisahana ny aterineto, no mitily ireo votoaty lasibatr'ilay lalàna, izy no mangataka amin'ilay mpampiantrano mba hamafa ilay votoaty. Raha ao anatin'ny 24 ora tsy nisy valiny avy amin'ilay mpampiantrano, na tsy hita izay azo hifandraisana aminy, dia alefan'ny OCLCTIC ho an'ireo mpanome tolotra aterineto (FAI) ny lisitr'ireo adiresy hobahànana sy mampahafantatra ilay olona manana fahefana hanao izany asa izany.
Azo atao eny anatrehan'ny fitsaràna ny manohitra ilay fanapahankevitra fibahanana na fanesorana tsy ho hita anaty lisitra fikarohana, saingy tsy mbola nisy aloha ohatra momba ny nanoheran'ny tribonaly ireo fanapahankevitry ny Ministeran'ny Atitany. Mbola andrasana hatreto izay hetsika ara-pitsaràna hampiasàna ireo fitaovana rehetra omen'ny lalàna hiarovana tena.
Tsy misy lisitra ho an'ireo tranonkala voakasiky ny fanesorana votoaty, fibahanana na fanesorana tsy ho hita anaty lisitra fikarohana. Olana io tsy fisian'ny mangarahara io amin'ny famelàna fotsiny ny CNIL sy sampandraharaha iray ao amin'ny polisy hifanatrika amin'ny fanatanterahana ny asa, na dia mendri-kaja toy ny inona aza izy.
Ny tatitry ny CNIL tamin'ny Aprily 2016 dia manindry fa tsy nisy fibahànana tafahoatra tsinjo, izany hoe pejy voabahana nefa tsy tokony ho nisy antony nanaovana izany. Tarehimarika iray hafa mahaliana, ny an'ireo andrana hidirana tamin'ireny tranonkala nobahanana ireny : salanisa 34 000 eo ho an'ireo tranonkala miresaka vetaveta atao amin'ankizy ary 494 ho an'ireo votoaty mihantsy asa fampihorohoroana. Noho ny fangatahan'ny CNIL dia nomena tamin'ny fomba tsy mitonona anarana ireny andrana ireny. Kanefa, raha ny momba ireo tranonkala miresaka vetaveta atao amin'ankizy, “betsaka tranonkala mitovitovy amin'ireny no nipoitra, miaraka aminà adiresy somary novaina kely”, taorian'ny fibahànana.
Tsy dia mahataitra loatra ao Frantsa.
Octave Klaba, mpanorina ny OVH, ilay goavana ho an'ny frantsay sy ny eoropeana amin'ny fampiantranoana tranonkala, nandritry ny fandraisany fitenenana tao amin'ilay Vovonana tao Lille, dia niampanga [rohy amin'ny teny anglisy] ny fisian'ny fijery politika ao anatin'ilay fihitaran'ny sivana, izay tàkany tsara, saingy tsy ilaina noho ny endrika maha-manerantany ny aterineto”. Efa naneho ny fanoherany ireo fepetra fanarahana maso izy (indrindra fa ny fanaovana ho araka ny lalàna ny fihainoana sy fandraketana ireo resaka manokan'ny olona, tsy nahazoana alàlana tamin'ny fitsaràna) lany tao anatin'ilay lalàna fanangonam-baovao tamin'ny 24 Jolay 2015, nandrosoana ny loza mitatao (tsy narahana hetsika) mba hanilihana / hamindràna toerana ireo lohamiliny ary mazava ho azy fa ny ampahany amin'ny asany ho any ivelan'i Frantsa.
Navoakan'ny masoivoho Assocated Press ny torohay mifandraika amin'ireo fanambaràna nataon'ny minisitry ny atitany frantsay tao amin'ny Vovonana tany Lille, naompana betsaka indrindra taminà lohahevigtra hafa, dia ny momba ny fiarovana an-tserasera izay nahaliana ireo orinasa sy ireo mpitantan-draharaha, ary toa tsy mba nisy namerina tao Frantsa afa-tsy ny gazety Le Monde sy Métro. Moa ve noho ny habaky ny fampahalalambaovao efa tototra loatra amin'ny fihetsiketsehana fampielezankevitra hofidiana ho filohampirenena, sy ny fanafihana vao haingana nitranga tao Louvre ? La Quadrature du Net, tilikambo fiambenana ny fahalalahan'ny aterineto, tsy mbola niresaka an'io hatreto.
Saingy efa voalaza ny zavatra rehetra, na efa ho izany, tao anatin'ireo fanehoankevitra nivoaka tamin'ny 2015 nandritra ny fotoana nametrahana ilay fepetra fibahanana tranonkala. Amin'ny teny anglisy, jereo ity fampitandremana ity, avy amin'ny EDRI (European Digital Rights, fivondronan'ireo fikambanana eoropeana miaro ny zo sivily sy maha-olona). Na, amin'ny teny frantsay, mba ho ohatra iray, ny fanoheran'ny tranonkala Islamika Newsinfo ny fibahànana azy.
Aleo ampahatsiahivina antsika fa ny fahalalahana maneho hevitra, ao Frantsa, toy ny hita betsaka manerana an'i Eoropa, dia tsy raisina toy ny any Etazonia ho zo raikitra. Mbola misy lalàna mamefy azy io, izay mandràra, indrindra indrindra, ny fiantsoana fankahalàna foko na finoana, ny fanindrahindràna ireo heloka an'ady sy ny asa fampihorohoroana, ary miafara amin'ny fanenjehana ny fandikàna azy.